အဆငျ့မွငျ့ သှားဘကျဆိုငျရာ နညျးပညာ သုံး ကုသမှုမြား သှားဘကျဆိုငျရာ နညျးပညာ - Dental Hospital Thailand
Bangkok Dental Hospital Digital Dentistry
BIDHသည် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းသွားပစ္စည်းကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ 3D CT scan ၊ digitalized x-rays ၊ digital scans ၊ dental implants surgical guides နှင့် CAD / CAM digital flow systems တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။
ဘနျကောကျ သှားဆေးရုံတှငျ ဆေးရုံလုပျငနျးစဥျတလြောကျ နှငျ့ သှားရောဂါအထူးကု ဌာနတဈခုခငျြးစီတှငျ သှားဘကျဆိုငျနာ နညျးပညာ ကို အသုံးပွုထားပါသညျ။
Digital Technologies & Digital Dental Lab
ကြှနျုပျတို့ ဘနျကောကျ သှားနှငျ့ခံတှငျး ဆေးရုံတှငျ သှားဘကျဆိုငျရာ နညျးပညာမြား နှငျ့ on-site digital dental lab တို့အား လူနာမြား၏ အကြိုးအတှကျ အသုံးပွုပါသညျ။
လူနာမြားအား ပိုမို ဘေးကငျးစခွေငျး
ရောဂါရှာဖှရောတှငျ ပိုမို စစေ့ပျစှာ လုပျဆောငျနိုငျခွငျး
ဘေးအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျသော အခွအေနမြေားကို ရှာဖှဖွေရှေငျးနိုငျခွငျး
ကှနျပွူတာနညျးပညာဖွငျ့ လငျြမွနျစှာ ပွုပွငျထိနျးညှိမှုမြား လုပျနိုငျခွငျး
ယနခေ့တျေ သှားဆေးပညာလောက၏ တိုးတကျခွငျးမြားနှငျ့ အတူ ဒဈဂဈြတယျနညျးပညာသညျ ကြှနျုပျတို့၏ သှားနှငျ့ ခံတှငျး ဆရာဝနျမြားအား မြားစှာထောကျပံ့ပေးပါသညျ။
ကြှနျုပျတို့သညျ Romexis® Clinic Management ကို အသုံးပွုထားသောကွောငျ့ ခြိတျဆကျကုသမှုမြားတှငျ အခြိနျနှငျ့ တဈပွေးညီ လုပျဆောငျနိုငျပါသညျ။ ဤဆော့ဖျဝဲသညျ ဆေးရုံအတှငျးရှိ သှားဆေးကုသခနျးနှငျ့ ဓာတျမှနျဌာနမှ အခကျြအလကျမြားကို အလိုအလြောကျ စုဆောငျးပေးပါသညျ။ ထို့ပွငျ သမားရိုးကြ ကိရိယာ စဈဆေးထိနျးသိမျးခွငျးမြားနှငျ့ ဘေးအန်တရာယျဖွဈစနေိုငျသော အခွအေနမြေားကို ရှာဖှဖွေရှေငျးနိုငျခွငျးအား အခြိနျတိုတိုအတှငျး လုပျဆောငျနိုငျ စပေါသညျ။
Digitalization within Sterilization Concepts
လူနာမြား၏ ဘေးကငျးမှုမှာ အဓိက ရညျရှယျခကျြဖွဈသောကွောငျ့ အဆငျ့မွငျ့ ဒဈဂဈြတယျနညျးပညာကို ပိုးသနျ့စငျစနဈ sterilization processes တှငျလညျး တပျဆငျ အသုံးပွုထားပါသညျ။
1. Dental Implant Center
Digitalized x-rays & intraoral x-ray for low dose imaging
implant pre-planning software on implant placement
individualized surgical templates
customized abutment with CAD/CAM
digital milling enable all ceramic zirconia crowns in 24 hours
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းသွားမြစ်တုအထူးကုစင်တာ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ဘန်ကောက်သွားဆေးရုံသည် သွာမြစ်တုကုသမှုများတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းပညာများကိုဦးစားပေးအသုံးပြုပါသည်။
2. Cosmetic Dental Center
Digital Smile Design (DSD) that matches teeth design to facial profile
digital scanner for veneers and crowns
Computer Aid Design & Computer Aided Milling Machines
ကြွေသွားတုအစွပ် Crown / Veneer ကုသမှုများတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံယူစနစ်အား ယခုအခါ CAD/CAM နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သွားတုပြုလုပ်သူများသည် ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် သင့်သွားတုပစ္စည်းများကို ၂၄ နာရီ အတွင်း ပုံထွင်း ပြုလုပ်ပေး နိုင်ပါသည်။
3. Orthodontics Center
Invisalign (USA) patented computer Clincheck computer simulation
သွားညှိကုသမှုခံယူရာတွင် မည့်သည့်ကုသမှုပုံစံက သင်နှင့်သင့်တော်သည်ကို သွားညှိအထူးကုဆရာဝန်မှ စစ်ဆေးပေးပါမည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် Invisalign သွားညှိကုသခြင်းမှာ လူကြိုက်များလာ ပါသည်။ Invisalign ဆိုသည်မှာ အံစွပ် အကြည်လေးများအသုံးပြု၍ သွားညှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းအံစွပ်များကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ပါသည်။ Invisalign သွားညှိကုသမှုတွင် itero digital scanners ဖြင့် သွားပုံစံယူသောကြောင့် ထိုသွားပုံစံအား အမေရိကန်သို့ ချက်ချင်းပို့ကာ ကုသမှုအစီအစဉ်တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ ဤသွားညှိမှုတွင် လူနာများအနေဖြင့် ကုသမှုမပြုလုပ်ခင်မှစ၍ ရရှိလာနိုင်မည့် ကုသမှုရလဒ်နှင့် လိုအပ်သော အံစွပ်အရေအတွက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
ကွန်ပြူတာဖြင့်ပုံစံဖော်တွက်ချက်ထားသော သွားညှိကုသမှုအစီအစဉ်အား လက်ခံပါက အမေရိကန်မှ အံစွပ်အကြည်များအား ပြုလုပ်ပေးကာ သင်၏သွားညှိကုအထူးကုဆရာဝန်ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
4. Endodontic Center
Carl Zesis endodontic micrsocope
သွားအကြောထုတ် ကုသမှုဆိုသည်မှာ သွားအမြစ်အတွင်းသို့ သန့်ရှင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းကုသမှုတွင် သွားအကြောထုတ်အထူးကုဆရာဝန်မှ သေးငယ်သော သွားအမြစ်အတွင်းသို့ အနုစိတ်ကုသရပါသည်။ အချို့ခက်ခဲသော အခြေအနေများတွင် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆေးရုံတွင် အသုံးပြုသော အထက်ပါ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူနားများအား ပိုမိုဘေးကင်းစေ၍ မြန်ဆန်ကောင်းမွန်သော ကုသမှုကို ရရှိစေပါသည်။
ဆူခွန်ဗစ် ၂ လမ်း
3D CT Scan Digital Flow နှငျ့ Digital Smile Design